ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာ တွေပြောတဲ့ တရားမျှတရေး အတွက် တော်လှန်ရေးသမား တမန်တော် မုဟမ္မဒ် အကြောင်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« 2014 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar
သူတို့ ယုံကြည်လို့ အဝတ်စုတ် တိုင်ပတ်ပြီး ကိုးကွယ်ချင် ကိုးကွယ်မယ်။ ရွှံ့ပုံ ကို အမြတ် တနိုးထားပြီး ထိုင်ရှိခိုးချင် ခိုးမယ်။ ဒါလူတိုင်းရဲ့ မွေးရာပါ အခွင့်အရေး ဖြစ်တယ် »
ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာ တွေပြောတဲ့ တရားမျှတရေး အတွက် တော်လှန်ရေးသမား တမန်တော် မုဟမ္မဒ် အကြောင်း
M-Media သူရမင်းမင်း ရေးသည်။ အောက်တိုဘာ ၂၃ ၊ ၂၀၁၄
အမျိုးဘာသာကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့ အရေခွံခြုံပြီး ရွေးကောက်ပွဲနီးလေ မွတ်စလင် မုန်းတီးရေး အရှိန်တိုးမြင့်လေ လုပ်လာတဲ့ အောင်ဇေယျတု ဂျာနယ်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ပေါ်တင်စော် ကားထုတ်ဝေလာပါတယ်။ စော်ကားတဲ့ထဲမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်တွေ အသက်တမျှ ချစ်ခင် တန်ဖိုးထား တဲ့ ရှေ့ ဆောင်လမ်းပြ တမန်တော် မုဟမ္မဒ် ကို မဟုတ်မမှန် အချက်တွေသုံးပြီး တမင် ဂုဏ်သ ရေဖျက်ဖို့ ကြိုးစားထားပါတယ်။ အောင်ဇေယျတုဆောင်းပါးရှင်ဟာ တမန်တော် မုဟမ္မဒ် လို နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ကျော်သည့်တိုင် ကမ္ဘာကျော် ကျော်ကြား လွှမ်းမိုးမှုရှိဆဲ ပုဂ္ဂိုလ် အ ကြောင်းရေး ရာမှာ မုဟမ္မဒ် ရဲ့ ဘ၀အကြောင်း နဲနဲတောင်လေ့လာခဲ့ပုံ မရပါဘူး။
ကမ္ဘာကျော် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်အကြောင်းကို ပေါက်လွတ်ပဲစား အဆင့်လောက် ဆောင်းပါးရေး ဖို့ အတွက် မွတ်စလင်မုန်းတီးရေး အပေါစား စွပ်စွဲချက်တွေသာဖတ်ပြီး မြန်မာပြည်သူတွေကို အမုန်းမီးတိုက်ဖို့ သက်သက်သာ ရေးထားတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ ခုလို အပေါစားဆောင်းပါး တွေနဲ့ခြားနားစွာ ကမ္ဘာ အသိအမှတ်ပြု သမိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့အထ္တုပတ္တိ စာရေးဆရာ (biographer) တွေက မုဟမ္မဒ် ကို သူရဲကောင်း၊ ရှေ့ ဆောင် (role model)၊ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။ ဒါကို မုန်းတီးရေးသမားတွေက သိပုံတောင်မရပါဘူး။
ကမ္ဘာကျော် The First Muslim (ပထမဆုံး မွတ်စလင်) စာအုပ်ရေးသားတဲ့ ဂျူးလူမျိုး လက်စလီ ဟက်ဇလတွန် က မုဟမ္မဒ် ဟာ သမိုင်းသက်တမ်းတလျှောက် လွှမ်းမိုးမှု အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့Huffington Post ဆောင်းပါးမှာရေးပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ စာအုပ်ဟာ ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ကြောင်း The New York Times, Seattle Time,San Francisco Chronicle, Major History တို့ က မှတ်ချက်ပေးပြီး အဲ့ဒီစာအုပ်ဟာ ကမ္ဘာတခွင့် စာဖတ်သူတွေ က ကြယ် ၅ ပွင့်အနက် ၄ ပွင့် နဲ့၅ ပွင့် မှတ်ချက် ပေးကြပါတယ်။
နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့ရေးတဲ့စာအုပ်ကို နိုင်ငံတကာ စာဖတ်သူတွေက ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါ တယ်။ အောင်ဇေယျတုလို အပေါစား ဆောင်းပါးလောက်နဲ့ ပြည်သူတွေကို အမုန်းမီးလောင် တိုက်သွင်းဖို့ဖန်တီးထားတဲ့ ဂျာနယ်ကသာ အချက်မှားတွေနဲ့ သာ တမန်တော် မုဟမ္မဒ် ကို ဂုဏ်သရေ ဖျက်တာပါ။
စာရေးဆရာမ လက်စလေက ထောက်ပြတဲ့ အချက်တချို့ ကတော့
မိဘမဲ့ကလေးမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူသို့–
မုဟမ္မဒ် ဟာ မိဘမဲ့ကလေး ဘ၀ကနေ ကမ္ဘာကျော် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်။ သူ့ အဖေဟာ မုဟမ္မဒ် ကို သူမိခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ အချိန်က ဆုံးသွားတယ်။ မွေးပြီးချင်း အမေနဲ့ ခွဲနေ ရတယ်။ အသက် ၅ နှစ် မှာ မိခင်ဆီပြန်လာပြီး တစ်နှစ်ကြာတော့ မိခင်လည်း ဆုံးသွားတယ်။ မိဘ၊ ဆွေမျိုးအသိုင်း အ၀ိုင်းရှိဖို့အရေးကြီးတဲ့ အဲ့ဒီအချိန်ခါက အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မိဘမဲ့ကလေး မုဟမ္မဒ် ဟာ ချောင်ထိုးခံရတယ်။ မိဘမဲ့ သူ ဆင်းရဲကလေးအဖြစ် နေထိုင်ခဲ့ရပြီး ကုလားအုပ် ထိန်းအဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့ ရတယ်။ ငွေကြေးဥစ္စာ ဂုဏ်ပကာသနရှိသူတွေ၊ အာဏာရှိသူတွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုကို ချို့ တဲ့သူတွေ ခါးဆီးခံရတာကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ပြီး ချို့ တဲ့တဲ့လူတွေဖက်က မခံမရပ်ဖြစ် ပြီး အဲ့ဒီအချိန်က ဥစ္စာနဲ့ ပါဝါရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားကို ပြန်ပြီး အာခံခဲ့တဲ့၊ ခုခေတ်စကား နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ (activist) ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တယ်။
မက္ကာကို အုပ်စိုးတဲ့ လူကုန်ထံတွေရဲ့ဖိနှိပ်မှု၊ အာဂတိပျက်ချစားမှု၊ သွေးစုတ်မှုတွေကို တော်လှန်တဲ့ တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်တယ်။ စာရေးဆရာမ လက်စလေအဆိုအရ မုဟမ္မဒ် ဟာ အခုခေတ်စားနေတဲ့ Occupy လှုပ်ရှားမှု (Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Hong Kong) စတဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေလို လုပ်ရပ်မျိုးစတင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။
အစ္စလာမ် မထွန်းကားသေးတဲ့ ၇ ရာစု မက္ကာမှာ နယ်ဝေးသွား ကုန်သွယ်မှုက အဓိက စီးပွား ရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ တဖွဲ့ နဲ့တဖွဲ့ ၊ တအုပ်စုနဲ့တအုပ်စု အပြန်အလှန် ဦးသူစား၊ ကြီးနိုင်ငယ် ညှင်း လောကမှာ ဆင်းရဲတဲ့လူတွေဖက်က ရပ်တည်ပြီး ဓနချမ်းသာသူနဲ့အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုအံတုပြီး ဖိနှိပ်တဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ပုံစနစ်တွေကို တွန်းလှန်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး စတင်တောင်းဆိုသူ
၇ ရာစု အာရပ်လောကမှာ သမီးမိန်းကလေးထက် သားကိုပဲ ဦးစားပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီခေတ် စီးပွားရေးအရ သားသာလျှင် ခရီးရှည်သွား စီးပွားရေး၊ စစ်မက်ရေးရာတို့ မှာ အားကိုးရပြီး မိန်း ကလေးဆိုရင် အားကိုးရာထက် မိဘက ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် သမီး မိန်းကလေးဆိုရင် သတ်ပစ် တတ်ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ခေတ်သမယမှာ မုဟမ္မဒ် မှာ သမီး ၄ ယောက်ရှိပါတယ်။ သားကတော့ မွေးကင်းစပဲ ဆုံးပါးသွားပါတယ်။ သမီး ၄ ယောက် ဖခင်မုဟမ္မဒ် ဟာ အာရပ်တွေရဲ့ကျားမ ခွဲခြားမှုကို စိန် ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျားဝါဒကြီးစိုးခဲ့ အဲ့ဒီခေတ်မှာ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် မုဟမ္မဒ် ဟာ အသက် ၄၀ အရွယ် မုဆိုးမ ကို လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကုန်သွယ်မှု အချက်အခြာကျတဲ့ မက္ကာမှာ အခုလို စီးပွားရေး တရားမျှတဖို့(Economic Justice)၊ လူမှု ရေးတရားမျှတမှု (social justice) ရှိဖို့ တောင်းဆို လှုပ်ရှားမှုကို မက္ကာက လူကုန်ထံတွေနဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေက လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ ကို စိမ်ခေါ်တဲ့ မုဟမ္မဒ် ကို ရန်သူအနေနဲ့မြင်ပြီး ဆန့် ကျင်နှောက်ယှက်ကြပါတယ်။
အကြမ်းမဖက် တော်လှန်ရေးသမားမှ တော်လှန်ရေးသမားသို့ 
မုဟမ္မဒ် ဟာ ပထမ ၁၂ နှစ် တိုင်တိုင် မဟတ္တမ ဂန္ဒီစတိုင် အကြမ်းအဖက် ဆန္ဒပြတဲ့နည်း (passive resistance) ကို သုံးခဲ့ကြောင်း စာရေးဆရာမ လက်စလေက ဆိုပါတယ်။ ကုရ်အာန် ကျမ်းစာက လမ်းညွန်တဲ့အတိုင်း ရန်မူတိုက်ခိုက်မှုကို ငြိမ်းချမ်းရေး စကားဖြင့်လည်းကောင်း၊ လျစ်လျူရှုဖြင့်လည်းကောင်း၊ သွေဖီခဲ့သည်။ ခုနှစ် ၆၂၂ ရောက်ပြီး သူ့ အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများ ဆိုးရွားလာမှ မက္ကာမြို့ မှ မဒီနာသို့ ပြောင်းရွေ့ ကာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်သူများကို ဆက်ဆံရာတွင် အစ္စလာမ် မတိုင်မှီ အာရပ်လောက တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်မှုများကို တားမြစ်ပြီး ကုရ်အာန် ကျမ်းစာ လမ်းညွန်သကဲ့သို့တရားမျှသသော နည်းလမ်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၁၉၄၈ ဂျီနီဗာ ကွန်ဗန်းရှင်းပါ စစ်သုံ့ပမ်းများ ကာကွယ်သည့် စံနှန်းကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ ချို့ တဲ့သူများအား ညှာတာရန် စောင့်ရှောက်ရန် စသည့် စံနှုန်းများကြောင့် ထောက်ခံမှုများ တရှိန်ထိုး ရရှိလာပြီး ယနေ့ ထိတိုင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
This entry was posted on October 23, 2014 at 5:05 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.